ကောင်းစွာ အလုပ်မဖြစ်တော့သော ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံ၏ စည်းမျဉ်း ၁၀ ခု - ONE DAILY MEDIA
ကျန်းမာသောဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ၏ အခြေခံအချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင် စွဲထင်ပြီး ပုံသေလက်ခံထားသော အမှန်တရားများဖြစ်လာပါတယ်။ သင့်ရေချိုးခန်းအတိုင်းအတာ က အရင်ကထက် ပိုများတဲ့ အရေအတွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီအမှန်တရားတွေ အားလုံးက သင့်စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပုံသဏ္ဍာန်မှန်ပြန်လည်ရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်သည်ဟု သင်ယုံကြည်မ်ိပါလိမ့်မယ်။ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြေးခြင်း၊ အချိန်ဇယားဖြင့် အစာစားခြင်း၊ အချိုရှောင်ခြင်း၊ ရေများများသောက်ခြင်း အစရှိတဲ့စည်းမျဉ်းတွေအားလုံးက တကယ်ပဲ အလုပ်ဖြစ်ပါသလား??
ဟိုးယခင်ကာလများကနေ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲသင့်သော ကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံ၏ စည်းမျဉ်း ၁၀ ခုကို စုစည်းထားပါတယ်။
American Academy of Sleep Medicine မှပြုလုပ်သော သုတေသနပြုချက်အရ လူတစ်ဦးသည် ခန္ဓာကိုယ်အား ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် နေ့ဘက်တွင် စွမ်းအင်ရရှိရန်7နာရီအိပ်စက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ခွန်အားရရှိရန်နှင့် ညအချိန်တွင် ပြန်လည်အနားရရန် ဤအချိန်ကာလအပိုင်းအခြား အိပ်ရပါမယ်
နံနက်စာ ပမာဏသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ သီးခြားလိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင် အမြဲမူတည်နေပါတယ်။ အစားအသောက်က တကယ်စားချင်တဲ့အခါမှသာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်ခင်းမှာ အစာမစားနိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မနေဘဲ ရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်ရုံပါပဲ။
(😎 မနက်စောစော ထပြေးခြင်း
မနက်ပိုင်းရော ညနေပိုင်းမှာရော ပြေးတာက အတူတူပါပဲ၊ ဒါကြောင့် မနက်ခင်းမှာ ပြေးဖို့ စိတ်ကူးမရှိရင် မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါ့အပြင် မနက်ခင်းမှာ မပြေးခင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းစွာ နိုးထစေသင့်ပါတယ်။ မနက်စာစားပြီးလျှင် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် အနည်းဆုံး မိနစ် ၄၀ စောင့်ခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သင်ဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သကြားလုံးစားခြင်းသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သော ဂလူးကို့စ်ပါဝင်သောကြောင့် ဦးနှောက်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အချိုတွေကို အစားအသောက်ကနေ လုံးဝ မဖယ်ရှားသင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်စားတဲ့ သကြားပမာဏကို လျှော့ချဖို့တော့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သဘာဝဒိန်ချဉ်စားပါ၊ သကြားမပါသော အဖျော်ယမကာပူပူများကို သောက်ပါ သို့မဟုတ် သကြားလုံးအစား သစ်သီးများကို စားပါ။
(6) အားအင်ကုန်ခမ်းသည်အထိ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း
“နောက်နေ့မနက်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က မနာကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး” လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အားစိုက်ထုတ်မှု အရမ်းများသွားပြီး ကြွက်သားတွေ နာကျင်သွားတာပါ။ ကြွက်သားတစ်သျှူးဒဏ်ရာရခြင်းရဲ့ လက္ခဏာလဲဖြစ်ပါတယ် ။ဤအခြေအနေတွင် သင်၏အပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်အထိ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကို ရပ်လိုက်ခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
ရေသည် အစာခြေစနစ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဒြပ်စင်ဖြစ်ပါတယ် ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အရည်အလုံအလောက်မရရင် အစာအိမ်ဟာ တံတွေးကနေ ယူရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ရေသောက်ခြင်းကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းမွန်ရန် တကယ်လိုအပ်ပြီး အစာအိမ် အစာချေဖျက်ရန်နှင့် အစာစုပ်ယူရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုက်မဆာရင် မစားရုံပါပဲ။ အဓိက စည်းမျဉ်းကတော့ ဗိုက်ဆာတဲ့အခါမှသာ စားဖို့ပါ။ အစာစားချိန်ရောက်တဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သင့်ကို အချက်ပြပါလိမ့်မယ်။ သင့်နေ့စဉ် အစားအစာ စားသုံးမှုကို 5-6 ကြိမ် ခွဲစားတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
(3) အစာစားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ခြင်း
နေ့စဥ်အချိန်အတွင်း အချဉ်သောအများအပြားစားဖြစ်ကြပါတယ်။ သံပုရာလက်ဖက်ရည်၊ ရှာလကာရည်၊ အသုပ်စားခြင်းစသဖြင့် စားဖြစ်ကြပြီး အဆိုပါ အစားအစာများမှ အက်စစ်ဓာတ်အကြွင်းအကျန်များက သွားကြွေလွှာများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အစာစားပြီးပြီးချင်း သွားတိုက်တာကလည်း ပျက်စီးမှုကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် မကြာခဏ သွားတိုက်ခြင်းသည် သွားဖုံးများ နာကျင်ခြင်းနှင့် သွေးထွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင် ကြားဖူးသမျှ စည်းကမ်းအသစ်တိုင်းကို မလိုက်နာပါနှင့်။ အရင်လို နံနက်နှင့်ညတိုင်း သွားတိုက်ခြင်းက လုံလောက်ပါတယ်။
(2) ပေါင်မုန့် ၊ ကိတ်မုန့်များကို ရှောင်ခြင်း
ပေါင်မုန့်တွင် လိုအပ်သော အမျှင်ဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး ကိုလက်စထရောနှင့် bile acid တို့ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ထုတ်ယူပါတယ်။ မုန့်တွေကလည်း အစာခြေစနစ်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကူညီပေးပါတယ်။ တကယ်က ပေါင်မုန့်ချည်းသာ စားနေရရမယ်လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်နေ့လျှင် 200 ဂရမ် ဟာ လုံလောက်ပါတယ်။
(1) တစ်နေ့လျှင် ရေ ၂လီတာသောက်ခြင်း
နေ့စဥ်သောက်သောရေပမာဏသည် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်တသမတ်တည်းဖြစ်ရပါမယ်( 30ml/kg )။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေခြင်း ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ရေဆုံးရှုံးမှု အစရှိသော အချက်များအားလည်း အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရေဓာတ်မျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ဖျော်ရည်နှင့် အခြားအရည်များကိုလည်း သောက်နိုင်ပါတယ်
ရှေးယခင်ကတည်းက ကြားဖူးလာပြီး ပြောင်းလဲသင့်သော အခြားအခြားကျန်းမာရနေထိုင်မှုပုံစံ စည်းမျဉ်းများကို သင်သိပါသလား ?? ၎င်းတို့ကို မှတ်ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေပေးပါဦး။
သိပ္ပံပညာအရ သင့်အား ပိုက်ဆံထက် ပိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သည့် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများ